सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिकाका भवनको निर्माणकार्य गुणस्तरहीन । - सर्लाही टुडे
June 5, 2021 June 5, 2021 SarlahiTodayLeaveaComment on सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिकाका भवनको निर्माणकार्य गुणस्तरहीन ।
२२ जेष्ठ सर्लाही । सर्लाही जिल्लाका मलंगवा नगरपालिका वडा न. २ मा CTVT college र शिक्षा कार्यालयको अगाडि मलंगवा नगरपालिकाको लागि भवन निर्माणकार्यमा गुणस्तरहीन र चरम लापरवाही हुदाहुदै पनि सम्बन्धित निकाय मौन बसेका हुन्।
जनताले तिरेको करबाट मलंगवा नगरपालिकाको लागि बनाउन लागेको भवनमा गुणस्तरहीन समान प्रयोग हुदाहुदै पनि मेयर निरसल साह र जिल्ला सभापति मेथुर चौधरी किन मौन बसेका हुन्। यस्तो गुणस्तरहीन निर्माण हुँदा गलती कसको हो।.? यो भवन कति दिनसम्म चल्नेछ।..? सम्बन्धित निकायले कुनै चासो किन लिदैन। ..?
सम्बन्धित निकायले यस्तो गुणस्तरहीन काम रोकेर भवन निर्माणकार्य निरीक्षण गरेर सत्यतथ्य छानबिन गरि ठेकेदारलाई कार्यवाही गर्न स्थानीय जनताहरुले अनुरोध गरे
September 21, 2020 SarlahiToday
May 19, 2020 May 23, 2020 SarlahiToday